I-Apple yandisa inkqubo yokulungisa simahla ka-2013-2015 kwii-MacBook Pros | Ndisuka mac
Siphela namhlanje ngeendaba ezimnandi kwaye yile ngxelo, iApple iyandisile inkqubo yayo yokulungisa simahla Ukulungiswa kweMacBook kuthengiswe phakathi kuka-2013 ukuya ku-2015 abaneengxaki zokuthintela ukubonakalisa kwizikrini zabo. Olu luxwebhu lwangaphakathi oluvunyiweyo olutyhila ukuba inkampani igunyazise ukulungiswa kwasimahla okunokubandakanya ukuya kuthi ga kwiminyaka emine ukusuka kumhla wokuqala wokuthengwa kweelaptop.
Xa iMacBook Pro Retina yaphehlelelwa okokuqala, la maqela akhanya ngokokukhanya kwawo kwaye zezokuba izikrini zawo yayiyezo ezaziphawule ngaphambili kunye neqhwa ngokwemiqathango yezikrini zeRetina kwiilaptops ezithe zandiswa zaya kwezinye Iikhompyuter zehlabathi.
Nangona kunjalo, iiyunithi ezininzi zezi ncwadi zamanqaku zaqala ukuba neengxaki zokwaleka kokubonisa okungabonakalisi izikrini zabo, kunye namawaka abasebenzisi ababonisa ukuba izikrini zabo ziqwalasele ukunxiba kolu luhlu. Ukutyabeka okunganyangekiyo kwiglasi yokubonisa kwakugqityiwe.
Ingxaki yachazwa kwangoko kwangoko ngo-2015, emva koko iApple yasungula inkqubo yokulungisa simahla ngo-Okthobha ukulungisa ingxaki. Ngoku le nkqubo isasazekile.
Iiyunithi these 13 intshi kunye ne-15 intshi pro yenziwe ngo-2013, 2014 okanye ngo-2015 Zamkelwa ukuba zilungiswe siding simahla ukuya kuthi ga kwiminyaka emine emva komhla wokuthengwa.
Apha ngezantsi sikubonisa imihla ngokweemodeli ezifakiwe kule nkqubo:
2013 13 intshi MacBook Pro-Julayi 2018
2013 15 intshi MacBook Pro-Julayi 2018
2014 13 intshi iMacBook Pro-Matshi 2019
I-MacBook Pro ye-intshi ye-2014 intshi-ngoMeyi 15
2015 13 intshi iMacBook Pro-Okthobha 2020
2015 15-intshi iMacBook Pro: Isathengiswa
Ukuba izixhobo zakho zikule meko, nxibelelana noApple okanye uthathe iVenkile yeApple okanye inkonzo yezobugcisa ngokusemthethweni. Ukuba sele uhlawule ngokulungiswa, iApple inokukuhlawula ngokulungisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » I-Apple yandisa inkqubo yokulungisa simahla kwi-MacBook Pros ka-2013-2015
Ewe, kubonakala kulungile kwi-Apple ukwenza oku, ziindaba ezimnandi kakhulu.
UFernando Cardozo obambe umfanekiso sitsho
Molo, ndine-macbook pro 15 ″, phakathi ku-2015 ngale ngxaki. Ndihlala eArgentina kwaye akukho maziko asemthethweni okulungisa ngokokwazi kwam. Ngaba uyazi ukuba ndingayilungisa kwilizwe elingummelwane? enkosi kakhulu.
Phendula uFernando Cardozo
IPhakamileyo yeSierra Betas, iZiko ledatha laseIreland, uDenise oMncinci, kunye nokunye. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac